Phupha ngokuncoma Discover ➡️ Discover Online Online ➡️
Phupha ngokuncoma. Ayingawo onke amaphupha afanayo kwaye yiyo loo nto amanye awo esihlaba umxhwele nangaphezulu kwabanye, kwaye sinomdla wokwazi intsingiselo yawo. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nokutolika amaphupha? Qhubeka nokufunda.
Bonke abantu banqwenela nzulu ezintliziyweni zabo ukuqinisekisa nokuncoma. Kukwalulo mnqweno uqhuba abaninzi ukuba bathathe amanyathelo okanye basebenze kwinqanaba eliphezulu. Nabantwana bafuna ukunconywa ngobuchule babo, ngakumbi kubazali babo, kunjalo.
Nangona kunjalo, umnqweno wokunconywa unokuba nazo iingxaki. Kuba ukuba wenza ngale ndlela ukwanelisa le ntswelo, ukhawuleza uzingce kwaye mhlawumbi wenzakalise nabanye.
Ukuba ngoku siphupha ngokuncoma, ngokuqinisekileyo i-chimera "yokulangazelela" inokufihlwa ngasemva kwayo. Mhlawumbi umntu akalufumani ngokuthe ngqo olu qikelelo kwinqanaba lokuqonda kwaye ngoku uphila umnqweno wakhe ephupheni. Kodwa mhlawumbi enye into ifihliwe ngasemva kwalonto?
1 Uphawu lwephupha «ukuncoma» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukuncoma» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukunconywa» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukuncoma» - ukutolikwa ngokubanzi
Uhlalutyo ngokubanzi lwamaphupha lubeka uphawu "ukuncoma" njengophawu lwe umbulelo.
Ukuba ubonisa intlonipho ngokuziphupha ephupheni lakho, oku kungabonisa ukuba kungekudala uza kuvala ubuhlobo nabantu obathandayo nabaya kuba luncedo kuwe kwixa elizayo. Inokuba yinto enomdla kuye nakubani na obonisa oleleyo le mincili Ngaba yayingu mntu owaziwayo okanye ongaziwayo? Mhlawumbi nokuba liqabane lakho?
Ukuba umphuphi ngokwakhe ubonakalisa intlonipho komnye umntu, oku kungabonisa ukuba omnye umntu unobungane kulo mntu kuthethwa ngaye. Nangona kunjalo, ayifanelanga ukuba ibe ngulo mntu ubuphupha ngaye. Ukunconywa okunamandla komnye umntu nako kunokuba njalo umnqweno yendlela onokufana ngayo nalo mntu.
Nabani na obonisa imbeko ephupheni lakhe kumntu omde, njengomphathi wakhe, kusenokwenzeka ukuba kuthetha ukuba kungekudala uza kungena ukwehla kwezentlalo. Ukuba ufumana inkuthazo koogxa bakho okanye kusapho lwakho, uyakufumana iindlebe ezivulekileyo kwabanye malunga nomcimbi othile.
Uphawu lwephupha «ukuncoma» - ukutolikwa kwengqondo
Uphawu lwephupha «ukuncoma» luphawu kuhlalutyo lwengqondo lwephupha kwiimeko ezininzi ingxaki malunga nokuzithemba. Kuba oku kubonakala ngathi akuphuhlanga ngokwaneleyo, yiyo loo nto umntu ochaphazelekayo naye enokuziva ngathi akabonelanga abanye. Iphupha lizama ukubuyekeza le mvakalelo ikakhulu ngephupha lokuqinisekisa. Ngamanye amaxesha, nangona kunjalo, unqulo lwamaphupha lunokufihla ukunconywa kwenyani, okungafuniyo ukubonisa omnye.
Ukuba umphuphi uncoma indoda okanye umfazi ngelixa elele, oku kuhlala kubonisa ukuba ujonge omnye ngentlonipho epheleleyo. Ukuba, kwelinye icala, naye ufumana ukunconywa ephupheni, oku kuyaziwa ngokubanzi njenge isiqinisekiso ye-subconscious eyilelwe isimilo sokuziphatha.
Ukuba umntu oleleyo uyabonwa kwaye uyathandwa ngobukroti bakhe, uhlala efuna indumiso kunye nengqwalaselo ebomini bakhe. Umntu ekuthethwa ngaye angathanda ukubona ubuchule bakhe buqinisekiswa ngabanye. Ukuba ephupheni umfazi uhlangabezana nokudumisa ngenxa yeenwele zakhe ezinde, kufuneka atolike kwinqanaba lokomoya.
Uphawu lwephupha «ukunconywa» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, umnqweno wokunconywa ephupheni unokwanelisa imfuno yalowo uleleyo yokuqinisekisa iphupha. Bonisa ulwazi lwakho kwicandelo eligqithisileyo.
Iphupha NgeeFries zaseFransi